Orinasa sy mpanamboatra finday any aoriana any China | SJJ
Fitaovana havaozina avo lenta, be asa, mora ampiasaina ary ho an'ny findainao. Miaraka amina fehin-telefaona iray, azo antoka sy mafy orina fa afaka manafaka ny tananao ianao nefa tsy manahy intsony fa mandatsaka ny telefaoninao indray. Ny fantsom-pifandraisana finday Silicone dia fanomezana lehibe hampiroborobo ny orinasanao .Fa ...
Fitaovana havaozina avo lenta, be asa, mora ampiasaina ary ho an'ny findainao. Miaraka amina fehin-telefaona iray, azo antoka sy mafy orina fa afaka manafaka ny tananao ianao nefa tsy manahy intsony fa mandatsaka ny telefaoninao indray. Ny fantsom-pifandraisana finday Silicone dia fanomezana lehibe hampiroborobo ny orinasanao.
Ny fitaovana silika avo lenta dia manome fiainana lava maharitra sy dokambarotra maharitra
Tazomy tsara eo aloha ny telefaoninao, mety hitahiry ny carte de crédit, vola ary karatra anaran'ny orinasa.
Ny tadin-damosina dia manampy fikajiana azo antoka amin'ny telefaoninao ary mitazona azy tsy ho solafaka sy hikorisa, ary manome fiarovana amin'ny gorodona ambonin'ireo sary mihetsika rehetra.
Karazana roa: Miaraka amin'ny paosy karatra sy kojakoja plastika tsy misy paosy na fitaovana fanampiny
Ny fanontana fanontana manokana dia azo ampiana amin'ny lasitra efa misy.
Teo aloha: Telefaona fanoherana slip-pad finday
Manaraka: Haingo akrilika, Tags ary hafa
Tady fehin-tànana finday
Tady fanintonana finday
Tady fihazonana finday
Tady Loop an'ny telefaona
Mpihazona aluminium miorina
Mpihazona telefaona finday alimina